Kusamisiwe ukungenelela kukahulumeni endlunkulu kazulu - Ilanga News
Home Izindaba Kusamisiwe ukungenelela kukahulumeni endlunkulu kazulu
Kusamisiwe ukungenelela kukahulumeni endlunkulu kazulu
UNDUNANKULU kaZulu iNkosi Mangosuthu Buthelezi.ISITHOMBE NGU: SANDILE MAKHOBA
KUMISWE ukungenelela kukahulumeni ezindabeni zaseNdlunkulu kaZulu ezithinta ukuphakanyiswa kweSilo uMisuzulu kaZwelithini njengoba kuke kwaba nesiphithi-phithi ngeledlule.
UNdunankulu kaZulu iNkosi Mangosuthu Buthelezi, uveze lokhu esigcawini sabezindaba ngoLwesibili eThekwini lapho ephinde wafu-nda khona nesitatimende soMntwana Simakade Zulu obezihlangula ekugaqeleni isihlalo sobukhosi.
INkosi Buthelezi ithe ngemuva kokuphakanyiswa kweSilo uMisuzu-lu, uthintwe nguNdunankulu wa-KwaZulu Natal uMnu Sihle Zikala-la noNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nobuHoli beNda-buko uDkt Nkosazakana Dlamini-Zuma ngenhloso yokungenelela ukuze kube nesixazululo ezinxu-shunxushwini obekuthiwa zikhona eNdlunkulu.
INkosi Buthelezi ithi ibatshelile ukuthi izodlulisa isiphakamiso sabo eSilweni ukuze kube yisona esivumayo ukungenelela kwabo njengohulumeni.
“Ngemuva kokuxhumana neSilo noNdlunkulu Mayvis MaZungu, bo-babili bangicele ukuba ngibabo-ngele kundunankulu nakungqo-ngqoshe ngesiphakamiso sabo soku-ngenelela, kodwa okwamanje babona ukuthi bazokwazi ukuxazulula izinkinga ezikhona ngaphandle ko-kuthola usizo lwangaphandle,” kuchaza iNkosi Buthelezi.
Iqhube yathi ibe isiwudlulisa umyalezo njengoba unjalo kanti ne-Silo sikhulumile noMnu Zikalala ocingweni. Kulesi sigcawu iNkosi Buthelezi iphinde yacacisa nango-daba lokugcagcelwa kweSilo olusematheni kulezi zinsuku. Ikubeke kwacaca ukuthi kakukho okuphoqa iSilo esisanda kuphakanyiswa uku-ba sigcagcelwe ngaphambi kokuthatha isihlalo sobukhosi.
Ikhale ngemibiko esisabalele emithonjeni yabezindaba nasezi-nkundleni zokuxhumana ethi iSilo uMisuzulu ngeke sikwazi ukuthatha ubukhosi singakagcagcelwa. INkosi Buthelezi isole nabazibiza ngongoti bezindaba zaseNdlunkulu abaqhu-beka nokusabalalisa lokhu kubantu ekubeni kungelona iqiniso.
UShenge uthe iSilo uMisuzulu usevele useqalile ukuthatha izinqumo nokwenza umsebenzi wakhe wobukhosi. Uchaze le mibiko ngokuthi kayinasisekelo. Wenze isibonelo ngezinye iZilo ezike zabusa ubukhosi bukaZulu zingakagcagce-lwa, ebala iLembe uShaka kaSenza-ngakhona neSilo uDingane abange-na ngokwahlukana esihlalweni so-bukhosi bengagcagcelwe.
Uthe ukuphoqa ukuthi amakhosi agcagcelwe ngaphambi kokuthatha isihlalo sobukhosi kwafika nohulumeni wobandlululo. Uthe uma lo hulumeni obusayo wentando yeni-ngi uphoqa ukuthi iSilo uMisuzulu kumele agcagcelwe ngaphambi ko-kuthatha ubukhosi, uzobe uhamba ezinyathelweni zalowo wobandlululo.
UShenge uqhube ngokuthi ngalo-khu akasho ukuthi iSilo uMisuzulu uzobe engakathathi ngaphambi ko-kugcotshelwa kwesobukhosi. Uphi-nde waveza nokuthi okwamanje ngeke akwazi ukusho ukuthi iSilo sizogcotshwa nini ngokusemthethweni kwazise lolu wuhlelo lukahulumeni kanti naye kusamele asayi-nele amaminithi omhlangano othi-nta lolu daba ngaphambi kokulu-dlulisela kundunankulu wesifundazwe.
Previous articleSekusemome ngesithembu sabesifazane kuleli
Next articleIphikisa ubuholi beSilo uMisuzulu iNdlovukazi